Qarax xaflad aroos u badalay murugo, ugu yaraan 30 qof oo ku dhimatay qaraxa oo ka dhacay Turkiga - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldQarax xaflad aroos u badalay murugo, ugu yaraan 30 qof oo ku dhimatay qaraxa oo ka dhacay Turkiga
August 21, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Qarax ka dhacay xaflad aroos oo ka dhacaysay Turkiga.
Istanbul-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 30 qof ayaa lagu dilay 94 qof oo kale in ka badana waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay munaasabad aroos oo ka dhacaysay gobolka koonfurta-bari ee Gaziantep ee dalka Turkiga.
Qaraxa oo dhacay shalay oo Sabti ahayd ayaa ahaa “mid argagixiso”, sida uu sheegay, Ali Yerlikaya, oo ah guddoomiyaha gobolka Gaziantep.
Mehmet Simsek, oo ah raysulwasaare ku xigeenka Turkiga ayaa u sheegay warbaahinta in qaraxa uu u muuqday inuu ahaa isbiimayn.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in kooxda ISIS (Daacish) ay u badantahay in ay masuul ka tahay qaraxaas.
“Dalkayga iyo qaranka oo dhan mar labaad bay hal fariin u dirayaan kuwa weerarada nagu haya: Ma guulaysan doontaan” sidaa ayuu yiri Erdogan.
Ma jirto cid si rami ah u sheegatay masuuliyada weerarkaas, marka laga tago eedaynta dowlada Turkiga.
Turkiga ayaa sanadadii u dambeeyay wajahayay weeraro argagixiso oo badan oo uu kamid ahaa kii bishii lasoo dhaafay ee Juun ka dhacay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Ataturk ee magaalada Istanbul, oo ay ku dhinteen ugu yaraan 44 qof.